Tips For Bamkhwelisa Kids On Uloliwe | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Tips For Bamkhwelisa Kids On Uloliwe
Iintsapho kids, Bamkhwelisa kids kuloliwe kunokuba zombini emangazayo kunye nelifikelelekayo bahambe. Kwakhona mhlawumbi yeyona ekhululekile kwaye ubuncinane uxinezeleko xa uhamba nabantwana. Siyazi bahamba nabantwana nje kukodwa kungakhathaliseki ukuba yintoni na indlela yokuthutha, ngoko ukuba ukuba Umgangatho wokuhamba nabantwana kuloliwe. Nazi ezinye iingcebiso!
Iintsapho ziya ufuna ukuya kwisikhululo ekuqaleni ukuya kulanda amatikiti kwaye ufumane nezihlalo elungileyo kunye kuloliwe. Ukuba izihlalo Akundibekelanga, izihlalo ziyafumaneka kwi lokuqala-eze, kunikwa wakhonza, ngoko musani zixinge kwindawo apho uya kube engenanto.
Cinga ebuthongweni xa Umgangatho wokuhamba kunye kids kuloliwe.
Bamkhwelisa kids kwi uhambo ngololiwe kuvela ixesha umntwana wakho zilale, ngoko qiniseka ukuba ukulungele. Zisa izinto intuthuzelo njenge umqamelo okanye blankie oyithandayo.
Eyona ndawo ibaluleke kakhulu kwisicwangciso sakho uhambo ngololiwe (ingakumbi ukuba yinto elide) kufuneka sibe njani uza ukugcina abantwana ukonwatyiswa.
An ukhetho izicacele ukuba abazali abaninzi kuba ukuthenga zokudlala ezimbalwa okanye balithandayo ukusuka ekhaya. Paint iinzipho wamantombazana, ukufunda iincwadi, ukudlala Uno, ziphile ezincwadini, ulalele ukuba neencwadi ezishicilelwe emacwecweni.
enye tip enkulu ngokuba Bamkhwelisa kids kuloliwe ukuba umxokozelo movie kwizixhobo zakho xa ekhaya yaye bayakwazi WiFi.
Nazi akukho mfuno isihlalo imoto okanye uzifake iimpawu ibhanti isihlalo, ngoko kids ezamahala ukushukuma uloliwe njengoko ubona kufanelekile! Ukuphonononga oololiwe kunye abantwana yindlela enkulu izigcine.
Akukho nto yimbi ngaphandle kokuba kwi uhambo baze awuthintelwa iingubo zakho nangayiphi na indlela. Dress for intuthuzelo! Siphakamisa nomoya, impahla stretchy neembadada bekhululekile ukuze banandiphe amava lwakho kuloliwe. abakhweli abanamava Sicebisa bezise obutofotofo ezimbalwa ukusuka ekhaya kakhulu, njengengubo okanye ukuphoswa umqamelo.
Yonke loo nto ekhohlo ukuyenza ahlale emva, akhululeke, Riding nabantwana kwi amava train. Kaloku kukho isiqingatha fun!
Sazise ngokukhetha tweeting unathi @SaveATrain! , Ungafumana amanye amajelo ethu kwezentlalo emazantsi Saveatrain
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Friding-with-kids-on-a-train%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
europeantravel kids longtrainjourneys trainmovies tips uloliwe train Travel uhambo ngololiwe Travel Travelingtips Travelingwithkids Travelingwithkidstips traveltips